Sawiro: Kediska Ramadaan SBC oo Maanta lasoo gabgabeeyay. – SBC
Sawiro: Kediska Ramadaan SBC oo Maanta lasoo gabgabeeyay.
Munaasabad lagu maamuusayay gabgabada tartan aqooneedka kediska xaafadaha Puntland kaas oo soconayay intii lagu gudajiray bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayna si wadajir ah u wadeen shirkadda isgaarsiinta Golis Mu’asada Minhaad & Madbacada Horyaal iyo warbaahinta SBC ayaa lagu qabtay hotelka Jubba ee magaalada Boosaaso.
Masuuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay xafladda kuwaas oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha gobalka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo), duqa magaalada Boosaaso Maxamed Siciid Shabeele, wasiirka xanaanada xoolaha Puntland C/Jamaal Cismaan Maxamed, mulkiiilaha warbaahinta SBC Cali Cabdi Awaare iyo Xubno ka socda Madaxda shirkadaha iyo Qeybaha Maalgelinaayay Kediska SBC
Gunaanadkii tartanka labada xaafadood oo la waydiiyay min 5 su’aalood ayaa waxaa gudigii garsoorka tartanka ay ku dhawaaqeen natiijada kasoo baxday oo noqotay in xaafada 1da August ee magaalada Garowe ay guushu raacdo islamarkaana ay sidaasi ugu guulaysatay koobkii kediska xaafadaha Puntland sanadka 2015ka waxana koobka kaalinta labaad ku guulaysatay xaafadda 26a juun iyagoo la kala gudoonsiiyay bilado iyo abaalmarin lacageed oo ay ku mutaysteen kaalmahan dahabiga ah ay soo gaareen. Kadib markii la guda galay khudbadaha masuuliyiinta ayaa mulkiilaha Televisionka iyo idaacadda SBC Cali Cabdi Awaare uu u mahadceliyay cid walba oo gacan ka gaysatay qabsoomida tartankan Si Gaar ah Shirkada Golis , Mu’asada Minhaj ee Dacwada iyo Horumarinta iyo Sidoo kale Madbacadda Horyaal kuwaas oo uu dhamaantood ku amaanay doorkooda ay barnaamijkan ka qaateen.
Sheekh Cismaan Xaaji Dirir oo ku hadlay Magaca Mu’asasada Minhaaj ayaa siweyn ugu mahadceliyay Warbaahinta SBC tebintii kediska o ay qeyb ka ahaayeen Maaligelintiisa isaga oo xusay in Minhaaj u taagan tahay ka qeybqaadashada barnaamij walba oo bulshada loogu gurmanayo, waxaana geesta kale u ku aamaanay sida SBC ay ugu xiran tahay dhamaanba barnaamijyada wax ku oolka ah ee bulshada waxtarka u leh .